I-iPad - iPhone News | Izindaba ze-IPhone
El iPad ithebhulethi noma tablet Kuthuthukiswe yi-Apple, kungumshini ophakathi nendawo phakathi kwe-Mac ne-iPhone. Ine- Isikrini sokuthinta esingu-9,7-intshi futhi kukhona amamodeli anokuxhumeka kwedatha noma amamodeli nge-WiFi kuphela, agxile kakhulu ekusetshenzisweni kwasekhaya. Yabelana ngohlelo olusebenzayo ne-iPhone, noma ngabe izinhlelo zishintshelwa kusikrini sayo esikhudlwana. Inesitolo sayo sohlelo lokusebenza futhi ingasebenzisa zonke izinhlelo zokusebenza ku-iPhone. Lapha ungabona izindaba zayo eziningi, kepha uma ufuna ukwazi zonke izindaba faka ibhulogi lodadewethu Izindaba ze-IPad.
Lo mqondo ubonisa ukuthi uhlelo lokusebenza Lwesimo Sezulu lungabukeka kanjani ku-iPadOS
Por U-Angel Gonzalez kwenza Amaviki angu-3 .
I-iPadOS yafika njengohlelo lwayo lokusebenza lwe-iPad eminyakeni embalwa edlule. Nokho, kuze kube yileso sikhathi i-iOS yayizivumelanisa nezimo…
Ungayibuka kanjani i-iPad ku-TV
Por U-Ignacio Sala kwenza Inyanga e-1 .
Impela izikhathi ezingaphezu kwesisodwa uke wacabanga ukuthi ungayibuka kanjani i-iPad kumabonakude ukuze ujabulele okuqukethwe...
Isizukulwane esilandelayo se-iPad Pro sizophatha i-chip ye-M2 futhi sizokhishwa ekwindla
Por U-Angel Gonzalez kwenza Izinyanga ze-2 .
Umcimbi we-Apple ngoMashi odlule ushiye eceleni i-iPad Pro. Imvamisa uMashi ubehlale…
Ukuhlola kuqinisekisa ukuthi i-iPad Air entsha inokusebenza okufanayo ne-iPad Pro
Por UToni Cortés kwenza Izinyanga ze-2 .
Abanye abantu abadukile bakholelwa ukuthi iphrosesa ye-M1 ekhweza i-iPad Air entsha "izofakwa" ukuze inikeze ukusebenza okuphansi...
Ungakwazi ukuxhuma i-iPad nge-USB-C kusibonisi seSitudiyo, kodwa amamodeli athile kuphela
Ubusha obuhle bomcimbi we-Apple izolo ntambama ngokungangabazeki bekuyi-Mac Studio kanye…
I-iPad Air entsha, isilwane esinesivinini esiphezulu
Por ULuis Padilla kwenza Izinyanga ze-2 .
U-Apple uvuselele i-iPad Air, futhi ufeze obekulindelekile. Ukufakwa kwephrosesa enamandla kakhulu…
I-iPad Air entsha izoba nephrosesa ye-M1 evela ku-iPad Pro
Sisekude namahora angama-24 ukusuka emcimbini wokwethulwa kwe-Apple futhi lokho kusho ukuthi amahlebezi…
Ungayikhetha kanjani i-iPad engcono kakhulu yasekolishi
Por UJordi Gimenez kwenza Izinyanga ze-3 .
Lesi ngesinye sezinqumo okufanele sizenze ngezikhathi ezithile futhi esinzima kakhulu ukuphendula...
I-hybrid ye-MacBook ne-iPad enesikrini esigoqayo sika-2026
Por ULuis Padilla kwenza Izinyanga ze-3 .
Izikrini ezigoqayo zinokusetshenziswa okuningi kunomakhalekhukhwini, futhi kungenzeka ukuthi i-Apple isivele isebenza…
I-iPad iseyiNkosi yamaphilisi, naphezu kokuntuleka kwesitoko ngenxa yokushoda kwama-chips
Por UToni Cortés kwenza Izinyanga ze-3 .
I-iPad ngokungangabazeki ingelinye lamadivayisi aphambili we-Apple. I-iPhone inezimbangi eziningi futhi kufanele…
I-Satechi Stand ne-Hub ye-iPad Pro, isitendi nakho konke ukuxhumana
Ukusebenzisa i-iPad yakho kwimodi yedeskithophu kuyiqiniso elinabalandeli abaningi ngokwengeziwe, futhi i-Satechi isinika...
Amaphuzu avelele esigabeni
Ungayenza kanjani ingasebenzi noma ususe i-akhawunti yakho ye-Facebook
Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokudweba nge-Apple Pencil ku-iPad Pro
Kungani i-iPad ingenayo i-calculator?
Kubiza malini ukulungisa i-iPhone noma i-iPad screen kwa-Apple?
Ungahlola kanjani izinga lebhethri le-Apple Pencil
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-iCloud kusuka ku-iPad
Ungawasusa Kanjani Amafayela Nedatha kusuka ku-iCloud ukuya ku-Free Up Space
Ungazithatha kanjani izithombe-skrini ngaphandle kwezinkinobho zasekhaya namandla
Amaqhinga ayi-10 owadingayo ukuze unqobe amazinga ezitshalo vs iZombies 2
Okokufundisa (iMac): Lungisa iphutha le- "iTunes Library.itl alikwazi ukufundwa ..."